Maamulka dagmada Hobyo oo mamnuucay gadashada dhulka danta guud ee dagmadaasi. | Somalia News
Maamulka dagmada Hobyo oo mamnuucay gadashada dhulka danta guud ee dagmadaasi.
Hobyo:-Waraaq ka soo baxday xaafiiska guddoomiyaha dagmada Hobyo Cabdulaahi axmed Cali Fat ayaa soo saarayqoraal uu ku ogaysiinayo laamaha Amniga Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah in la mamnuucay In la kala gato dhulka danta guud ee dagmada Hobyo.
Next articleAgaasimaha IMF “Afrika waa in laga caawiyaa dhaqaale xumada uu sababay COVID19”.
Previous articleAgaasimaha IMF “Afrika waa in laga caawiyaa dhaqaale xumada uu sababay COVID19”.